Irubber (yokulungisa ama-clamp)
Irabha isetshenziselwa ikakhulukazi ukulungisa amapayipi, ama-hoses nezintambo.
I-Mini clamp inamandla aqinile wokufakelwa ukuze ifakwe kalula futhi ilungele amahhashi amancane abiyelwe ngodonga phezu kwamapayipi angenasici.
Isisindo sepayipi le-duy elisindayo ngenjoloba
I-heavy duy pipe clamp enenjoloba iyisigcawu esikhethekile sokulungiswa kwamapayipi amisiwe.
Iphampu ye-hose ephindwe kabili
I-wire wire hose clamp iyatholakala ngezinto ezimbili. Amamayela welefoni ahlukile ngokobukhulu. Usayizi ongafakwanga etafuleni ungenziwa ngezifiso.
Izindlebe eziphindwe kabili ze-hose clamp
Izindunduma ezinezindlebe ezimbili zenziwa ngokukhethekile ngamashubhu wensimbi ephezulu angenasici, futhi ingaphezulu liphathwa nge-zinc.Compact kanye ne-lightweight design idinga umhlangano we-caliper.
I-Bridge hose clamp
Amabhampasi e-Bridge hose aklanyelwe ngokukhethekile amabellow, amabellows ajikelezisa kwesobunxele nangakwesokudla ukuze enze ikhadi elifanelekile lisonge ipayipi sag.I-hose ingaxhunyaniswa nesembozo sothuli, umnyango wokuqhuma, isixhumi nezinye izinto zokwakha uhlelo lokuqoqa uthuli olunamandla. Umklamo webhuloho uvumela ukuphoqa ukuthi ungene ngqo kwi-hose, ukubeka kalula i-hose ukuthola uphawu nokuphepha okuxhumekile. Ukwakhiwa kwensimbi engenasisekelo kokuqina.